Abaphathi abasha eKolishini lakwaHumanities emhlanganweni obubanjelwe eThekwini.
Abaphathi abasha bekolishi lakwaHumanities bebehlangene ukuzobonisana ngezindlela ezintsha ezizoyisa iKolishi phambili.
Umphathi wekolishi uSolwazi Joseph Ayee nabaphathi abasha abangu21 beminyango eyahlukene ekolishini bebehlangene ngomhlaka 25 no26 kuNhlolanja eThekwini.
Kulomhlangano bekwethulwa ukuthi iKolishi liqhamukakuphi, bebheka ukuthi likuphi okwamanje kanye nokuthi liyakuphi. Bekuhlanganiswa amacebo, kuphikiswana ngezinto ezingasebenza nezingeke zisebenze, ekugcineni okukhombise ukubambisana nokuzimisela ukusebenza ndawonye.
U-Ayee ubeke abantu esithombeni ngesikhathi ethula inkulumo ngezeHumanities nezeSocial Sciences eNingizimu Afrika nasemhlabeni wonkana. Ukhulume ngesivumelwano sakwaHumanities neSocial Sciences esisanda kwethulwa ithimba elaliqokwe uNgqongqoshe wezeMfundo ephakeme uDkt Blade Nzimande, nombiko we- Academy of Sciences of South Africa (ASSAf) nawo ngezihloko ezifanayo. Yomibili lemibiko yephuma ngonyaka ka2011.
Lemibiko ibinikeza izindlela ezintsha zokufundisa nezokwenza ucwaningo eziNyuvesi zaseNingizimu Afrika emikhakheni yakwaHumanities nakwaSocial Sciences. Ngokusho kukaNgqongqoshe lokhu kuzobeka lomkhakha ezingeni eliphezulu kwezenguquko nezentuthuko.
U-Ayee ukhumbuze abaphathi beKolishi ukuthi noma lemikhakha emibili isengcupheni ngenxa kokubhekwa kakhulu imikhakha yezesayensi ezweni lakithi nasemhlabeni wonkana, bangalilahli ithemba bahlale bazi ukuthi lomkhakha udlala indima enkulu ekuthuthukiseni imiqondo yabantu emphakathini. Uthe akumangazi ukuthi leliKolishi libizwe nge “dlozi” lase-UKZN.
Ukuthi kufikwe esivumelwaneni esisha sekolishi, abaphathi basebenzise imigomo eyisikhombisa yeNyuvesi iREACH ekubalwa kuyo ukuHlonipha, Ukuzimisela, Ukuvuma icala, ukuphatha kahle abantu bangaphandle nokuthembeka.
U-Ayee ubabongile abasebenzi ngokuzinikela kwabo nokuyeka konke ukuze bazokwazi ukuthamela lomhlangano obalulekile eKolishi. ‘Wonke umuntu ukhombise ekuzimisela ekufakeni umbono wakhe ekuyiseni iKolishi phambili.’